အနုပညာအိမ်လေး: ၈၈ အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်သို့ ယနေ့ သွားပြီ
၈၈ အဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်သို့ ယနေ့ သွားပြီ
မနီလာသိန်းနှင့် မမီးမီး ။ ဓာတ်ပုံ- ၈၈ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ပေးချက်အရ ၈၈ မျိုး ဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်း၊ မမီးမီးတို့ ဦးဆောင်သော ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသူများအား နှစ်သိမ့်အားပေးရေး၊ အခြေအနေမှန်များ သိရှိနိုင်ရေး အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းရေး အဖွဲ့သည် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန် လေဆိပ်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် စတင် ထွက်ခွာ သွားကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ရပ်များနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး လက်တွေ့ဘ၀ ပြည်သူ့ အသံများကို တိုက်ရိုက် နားထောင်ကြမှာဖြစ်ပြီး လူမှုရေး လိုအပ်ချက်တွေ ဘာတွေရှိတယ်-အခြေအနေ မှန်တွေက ဘာတွေဖြစ်နေတယ်- နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေက ဘယ်လို အဆင့်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ ကို လေ့လာပြီး သိရှိတဲ့ အချက်အလက်စုဆောင်းမှုတွေကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ကို ပြန်လည် အစီရင်ခံကြမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီအပြင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး အလှူခံရရှိတဲ့ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ ရိက္ခာ၊ အ၀တ် အထည်များကိုလည်း ခရီးစဉ်အတွင်း ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားကြမှာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ရန် စိတ်ပါ ၀င်စား၍ အလှူဒါနပြုလိုကြသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ က မည်သည့် စေတနာရှင်များကမဆို ၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ ယာယီ ရုံးခန်း တည်ရှိရာ အမှတ် (၂၈၄)/(က) ဝေဇယန္တာလမ်း ၁၆/၃ ရပ်ကွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သီရိဂုဏ်အိမ်ရာဆိုင်းဘုတ်ဘေးရှိ အဆောက်အဦ ရှိရာသို့ လာရောက် လှူဒါန်းနိုင် ပါ ကြောင်း နှိုးဆော်ထားတာလည်း သိရပါတယ်။ သတင်း
ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် Wednesday, Jun 20, 2012 Posted by
မတ်လအတွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော လယ်ယာမြေဥပဒေ၌ တောင်သူလယ်သ...
တောင်သူလယ်သမားတွေ အကူညီ တောင်းခံတဲ့ စာနယ်ဇင်း ရှင်...
BURMA လို့ ခေါ်ဝေါ်မှု့ NLD ခုခံချေပ
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ပြည်သူလူထု ရဲ့ ခေါင်...
ဥရောပ ခရီးစဉ်မှ ပြန်ရောက်လာမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့ ဂုဏ်ရည် ဆုရှင် လဖိုင်နော်မိန်း...
NGO တွေ ပြောင်းလဲသင့်ပြီဟု ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်ေ...
အမေစု အိမ်အပြန်ကို လူထုသန်းနဲ့ချီ ကြိုဆိုကြမယ် ( န...
" ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လူထုဖြင့် ကြိုဆိုရန်စီစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အတွင်း စံချိ်န်တ...
အစိုးရနှင့် KIA တစ်နှစ်ကျော်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း...
တော်ဝင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားများ ဆန္ဒပြ
ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပဲရစ်မြို့သူဆု ဂုဏ်ပြု ချီြး...
CYBER WAR စတင်ရန် အစီအစဉ် (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်မှ) စီစဥ...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ၌ မဟုတ်မမှန်ဖော...
မြန်မာ နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မျ...
မြန်မာဘက်ပို့မည့် လက်နက်များ မဲဆောက် တွင်မိ
မြန်မာပြည် သွားမယ့် လက်နက်တွေ မိပြန်ပြီ
ဘန်ကောက် ဆပ်ပလိုင်းချက် လက်နက် အများအပြား ဖမ်းမိ
"ဦးအောင်ဆန်းဦးကို နေအိမ်ခြံဝင်း တစ်ဝက်ခွဲပေးရမည့...
ထားဝယ်ခရိုင် လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမ...
ဗန်းမော်နှင့် ကသာ တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ စိုးရိမ် ရေမှတ...
ဘင်္ဂါလီ ၉၀ ကျော်ကို လဝက ဥပဒေဖြင့် စစ်ဆေး
ဂျပန် ရုပ်သံလိုင်း Sky Net တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မည်...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ဆောင်ရွက်သူ အားလုံး...
ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်အချို့ ရေကြီး
ဖမ်းဆီးခံရသော ဘင်္ဂါလီ ၉၀ ကျော် သံတွဲတွင် စစ်ဆေး
အခမဲ့ စာသင်ကြမယ် ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကိုရောက်ရှိ
ဦးဝီရသူရဲ့မွေးနေ့မှာ နိုင်/ကျဉ်းတွေ အတွက် ဂုဏ်ပြု...
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး အတွက် အမ...
ပူတာအိုမြို့အထွက် နာမည်ကျော် မူလာရှီးဒီး ကြိုးတံတာ...
ဂုဏ်ထူးဆောင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
ပြင်သစ်သမ္မတ ဖရန်ဆွာအော်လွန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
စစ်တွေမြို့၏ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် မိုးများ အဆက်မပြတ် ...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ယူကေ မှ ပြင်သစ်သို့...
UK က မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
လေဘာ ပါတီ ရုံးချုပ်သစ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဖွင့်လှ...
ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံတချို့ ပါတီမှထုတ်ခံရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း အစိုးရသတင်းစာမှာ နေရာပေ...
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာဝတီ မြစ်ရေကြီးမှု နောက်ဆုံးအခြေ...
မအူပင်မြို့နယ်မှာ သောင်မြေလု ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ အခမဲ့ ဆေ...
ထားဝယ်ချောင် သုသာန်အမှိုက်ပုံနေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော်သို...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ခရီးစဉ် အတွင်း ဒုက္ခသည် အရေး အဓိ...
စံချိန်တင် ရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနား အနိမ့်ပိုင်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လန်ဒန်မြို့ရှိ သံဃာတော်တွေကိုေ...
လူမှုကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ လိုအပ်နေကြောင်း သမ္မတ ပြောဆိ...
မိုးလေဝသ အထူးသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်
ကိုမင်းကိုနိုင် လယ်သမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ( ရုပ်သံ-သတင...
လျှပ်စစ်ရေတင် စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းသွားတာကြောင့် လယ်...
ဘုန်းတော်ကြီး သင်ကျောင်းရန်ပုံငွေ ဖယ်ရီကား ကို ထန်...
ပြည်ထောင်စု တံတား အဆင်းမှာ တိမ်းမှောက်သွားသည့် ကွန...
မစိုက်ပျိုးဘဲ ထားတဲ့ စစ်တပ်သိမ်း မြေများ လယ်သမားမျ...
ရှမ်းပြည်နယ်၌ လူသတ်၍ ပစ္စည်းများ ယူဆောင်သွား သူကို...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့...
မြ၀တီမြို့တွင် လက်နက်ကိုင်ပြီး ရွှေဆိုင်လုယက်မှု ဖြစ...
အဖေ နှင့် သား
အောင်ဆန်းဦး အတွက် လားရှိုးသိန်းအောင် ၏ ပေးစာ
မိဘ နှင့် သားသမီး ( ဖိုးဝမောင် ၏ ဆာင်းပါး )
ရခိုင် ၁ဝဦးသတ်သူ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ရာကျော် စစ်တွေထော...
အမွေ တ၀က်စီ ခွဲ ယူစေ
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံ...
"မြ၀တီမြို့ လယ်ကောင်တွင် သေနပ်ဖောက် လုယက်မှု တစ်ခြု...
ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်သစ်တွင် လွတ်လပ်ပြီး အားကောင်းသည...
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာ အသင်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတ...
ဦးသိန်းညွှန့်အပါအ၀င် ဥပဒေ ပညာရှင် (၂) ဦး လိုက်ပါေ...
အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် စောင်ရေပွား၍ ထီလိမ်လည်ရောင်း...
ရသေ့တောင် အကြမ်းဖက် လူသတ်မှု ဘင်္ဂါလီ ၅၀ကျော်ကို ဖမ်း...
၁၆ ရက်ကြာ ဆက်တိုက် ဆန္ဒပြနေဆဲ Famoso အထည်ချုပ် အလုပ...
အောင်ပါစေကြောင်း အောင်စေကြောင်းမြန်မာ ပြည်သူ အပေါင...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင် H.C.H.P (အခမဲ့)ဆေးခန်း ဖွ...
ပညာရေး မြှင့်တင်ဖို့ စီစဉ်ထားဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
သရက်ပင်ချောင်းလယ်သမားများ ၈၈ မျိုးဆက်နှင့်တွေ့ဆုံ
ပထမဆုံး အကြိမ် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်း ထိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗြိတိသျှ ပါလီမန်၌ မိန့်ခွန်းြေ...
ကျူးကျော် ဆိုင်ဟု သတ်မှတ်ပြီး တပ်မြို့စည်ပင်မှ အင်...
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် မီ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်ပ မြန်မာ့ သတင်းဌာနတို့ ...
တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်န...
လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊ (ဂ)...
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ကို ကူညီရန် ဗြိတိန်ကို ဒေါ်အောင်...
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် တင်သွင်း...
လန်ဒန်ရောက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မ...
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကြိုဆိုဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ခုတ်သံ အကြာဆုံး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် လန်ဒန်ရောက် မြန်မာ မိသားစ...
" မွေးနေ့ ( ၆၇ ) " မွေးနေ့မင်္ဂလာ သီချင်းလေးပါ ။ သက်...
မင်္ဂလာပါ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ခင်ဗျား ကျေးဇူးပြုပြီ...
အဓိက ဆုံးဖြတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေ ရှိနေသင်...
စမ်းချောင်းNLD၏ ပညာရေး အလှူ
အတ္တတွေဖြုတ်ကြ! Kyaw Thu
စက်ရုံလုပ်သား အနိမ့်ဆုံးလစာ ၅၆၇၀၀ ကျပ်ပေးရန် အလုပ်...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ပြန်ဆောက်...
လှိုင်သာယာ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း မီးလောင်မှု အမျိုးသမီ...
ကူတောင် ပျောက်ဆုံး အလောင်းများ ယခုတိုင် ရှာဖွေ မတေ...
အောက်စဖို့ဒ် မြို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မွေးနေ့
ကျား- မ ဖြစ်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်...
လူငယ်တွေ နိုင်ငံရေး လုပ်သင့်ကြောင်း ဒေါက်တာ အောင်ထ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ကို ရည်စူးပြီး သွေးလှူဒါ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်သို့ သွားေ...
၀န်ကြီးများ "လုပ်နည်းလုပ်ဟန်" ပြောင်းဖို့ ဦးသိန်း...
‘ကျရှုံးနိုင်ငံစာရင်း’ မြန်မာနိုင်ငံအဆင့် ၁၈ တွင်ရှ...
အညတရ သူရဲကောင်း ငါးဦးကို လူထုေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန...
ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ပြန်လည်နေရာချထားရေး နှင့် ကယ်...
ကချင် ပြည်နယ်တွင်းရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ လူဦးရေ ဆ...
UWSA နဲ့ SSA ကြား တင်းမာမှုကြောင့် ထိုင်းတပ်တွေ အသင...
မြန်မာပြည်သူ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏...
ရာစုနှစ်ရဲ့ သြဇာကြီးမားတဲ့ သတင်းစာဆရာ တဦး၏ ဈာပန ...
ံHAPPY BIRTHDAY DAW SAN SUU KYI ( ရုပ်သံဖိုင် )
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော...
ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၁ ဦးအသတ်ခံရမှု ဘင်္ဂါလီများ တ...
လူထုထဲက . . . သံမဏိ ကလောင်တစ်ချောင်းကြွေလွင့်
ဦးဝင်းတင် ဒဂုံတောင်ပိုင်း NLD ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ တက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် စုပေါင်းသွေး...
MDRI ၏ CSIS သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
၂၄ နှစ်ပြည့် ၁၉၈၈ (ဂျွန်)ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ( ရု...
တောကြီးတန်း အခမဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဘာသာစုံ ပညာဒါန (...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနာ...
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး နှင့် ပ...
သတင်းစာဆရာကြီး လူထုဦးစိန်ဝင်း ၏ နာရေး ဓါတ်ပုံများ...
နိုင်ငံရေးအရ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လိုအပ်ေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိုင်ယာလန်လူထု ထောင်နဲ့ချီြ...
TIME မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးပေါ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏...
အစိုးရ ၀က်ဘ်ဆိုက် အချို့နှင့် ပြည်တွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်
စစ်တွေ ဒုက္ခသည် အချို့ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါပါ ဖြ...
၁၉-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန...
ရခိုင် ကယ်ဆယ်ရေး ဒုတိယခြေလှမ်း
တိုင်းပြည်အတွက် လူထုတစ်ဦး ဆုံးရှုံးပြီ
ယနေ့ OSLO PEACE FORUM မှာ တွေ့ဆုံကြတဲ့ လူထုခေါင်းေ...
သာသနာ နဲ့မညီတဲ့တရားဟော ပိတ်ပင်မှု ( ရုပ်သံ-သတင်း )...
တောတန်းကြီး (အခမဲ့) ပညာဒါနကျောင်းဖွင့်ပွဲ
(ဂျွန်)ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ငွေရတုအကြို နှစ်ပတ်လည်...
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့တွင်နိုဘယ်လ် ငြိမ်းချမ်...
စစ်တွေမြို့နယ်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာရေးနာရေးအသင်းမှ ဦ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံတော် အခြေပြမိန့်ခွန်း ပြေ...
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ငွေရတု အကြို...
နော်ဝေနိုင်ငံ ဆောင်ရွက်ချက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ချီ...
ဘာဂန် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ဒေါ်စုနဲ့တွေ့ဆုံ ( အသ...
( နာရေး သတင်း )သတင်းစာ ဆရာကြီး ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ကွယ...
အမေစု နော်ဝေနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်...
ဦးကျော်လှအောင်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်စည်းမထား ဆရာဝန်များ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ရခိုင်ကယ်ဆယ်ရေး ပထမခြေလ...
၁၉၈၈ (ဂျွန်) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလူပ်ရှားမူ
ယောချောင်း အန္တာရာယ်ကြောင့် ရွာပြောင်းခြင်သူများ ( ...
အနိုင်ရ ဒီချုပ် ပါတီ၏ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှ...
ရခိုင် အရေး ပါတီများ ၏ သဘောထား ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဗလီတွေကို NLD စောင့်ကြည့် ( ရု...
ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ၏ (၄၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အလှူ
ကျပ် တစ်သောင်းတန် အပေါ် သူတို့ အမြင်၊ သူတို့ သဘောထာ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နော်ဝေ လူထုတွေ့ ဆုံပွဲ (ရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု လက်ခံခြင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ သြဝါဒ စကား နာ...
၁၆-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြ...
ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ ရေသန့်၊ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ဆေးဝါ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) မှ ရခိုင် ကယ်ဆယ်ရေးစတင်
ရပ်ကွက် လုံခြုံရေးအတွက် ညကင်းစောင့် သူများ ဖမ်းဆီး...
နိုင်ငံသားတို့ ၏ အသိပညာ ရေချိန် မြှင့်တင်ရေး
နိုဗယ်လ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုပေးပွဲ အခန်းအနားကို ပြည်...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဝေးရောက် မြန...
အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ စာသင်ကျောင်း ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာတွေအပေါ် ဦးဝင်းတင်ရဲ့သဘောထား အြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား နော်ဝေ နိုင...
NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိမ်းဆွေ ဒေးဒရဲခရီးစဉ်...
ဦးဝီရသူအား ဆုံးမသြ၀ါဒ ပေးရန် မဟန ညွှန်ကြား
နိုဗဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆု ပေးပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်နို...
ဇွန်လ(၁၅)ရက်နေ့က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဘန်းမြို့ရှိ နှင...
စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ဝမ်းရော...
ဦးကျော်လှအောင် အား အယ်လ်ကိုင်ဒါများ နှင့် ဆက်သွယ်...
လက်ရှိ ပဋိပက္ခများ အပေါ် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့မိန့်ကြား...
ယနေံ မနက် ၁၀း၄၀ အချိန်တွင် အင်းစိန်ဈေး တွင် မီးလေ...
"အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သက်နေသည် ...
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်ဖြစ်ပွားနေသည် တို့မှာ မြန်မာနိုင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးပမ်းကာ နေမကောင်းဖြစ်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရောက်မီ အော်စလို မြင်ကွင်း နှင...
ယနေ့ည ၁ နာရီ ၆ မိနစ်ခန့်တွင် စစ်တွေမြို့ ရခိုင်လူမ...
စစ်တွေတွင် နာရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ
ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ နဲ့ Dateline Irrawaddy ( ရုပ်သံ-သ...
မီဒီယာများမှ တဆင့် Share လုပ်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆို...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗိ...
မိုးထိမိုးမိ ရွှေလုပ်သား တောင်းဆိုချက် သဘောတူပြီ
ကုလကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံ မှမထွက်ခွာမီ သံရုံးအ...
ရမည်းသင်းမြင်ကွင်းအချို့( ဓာတ်ပုံ-သတင်း )
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေအနေများနှင့်...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အခြေအနေများမှာ ...
လူထု ခါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ယနေ့ မြင်ကွင်...
အိုအယ်အို ညီလာခံ အတွင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန...
စစ်တွေမြို့ ဆေးရုံကြီးအနီး ရေမြောင်းအတွင်း ဘင်္ဂါလီအ...
လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ထားသော်လည်း ဘင်္ဂလာ ရခိုင်များ...
ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ဗြိတိန်သံရုံးရှေ့တွင်...
ရခိုင် ပြည်နယ်က အခြေအနေကို ထိထိ ရောက်ရောက် မခြေမှု...
ဒီနေ့ မနက် စစ်တွေမြို့ရဲ့ အခြေအနေကတော့ တည်ငြိမ်နေပ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျ...
“အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (ILO) မှ မြန...
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်မတော်သား များက ရခ...
ဂုန်းကျော်တံတား ဆောက်လုပ်မှုကြောင့် သွားလာမှု အခက်တေ...
ဆင်ဆာ ပိတ်ခံ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ပြန်လည် ခွင့်ပြု ( ရုပ...
ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ စစ်တွေမြို့ မြင်ကွင်း ( ဓာတ်ပုံ-သတ...
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဖွ...
NLD အတွင်းရေးမှူး ဦးဉာဏ်ဝင်း မမှန် သတင်းပေးမှုဖြင့်...
စစ်တွေမြို့တွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအချို့သို့ ရောက်ရှိ...
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အ...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိစ္စများနှင့် ပတ်...
လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူခြင်း နှင...
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ဇူလိုင် ၄ တွင်ခေါ်
ဆန္ဒပြနေတဲ့ ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ရွှေလုပ်သားတွေ ရိက္ခာလိုအ...
တိမ်းရှောင်လာသော ရိုဟင်ဂျာများကို လက်ခံရန် UNHCR ၏...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဥရောပ ခရီးစဉ် စတင်ထွက်ခွာ ( ရုပ...
ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ စစ်တွေမြို့မြင်ကွင်း ( ဓာတ်ပုံ-သတင...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနှင့် စစ်တွေမြို့တို့တွင် ယေ...
မန္တလေး ဘာသာပေါင်းစုံ သြ၀ါဒ ခံယူပွဲ ရွေ့ဆိုင်း
ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် လူ ၂၁ ဦး သေဆုံးဟု အစိုးရ တ...
စစ်တွေ မြို့ရဲ့အခြေအနေ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေဆဲ
ယနေ့ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် တွေ့ရသည့်ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ...
အကြမ်းဖက် ဆူပူသူများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ...
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုမျ...
လေဝတီ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
အသက်ဆုံးရှုံးရသည့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများအတွက် ဆု...
ရခိုင်အရေး ခံစားမှု မလွန်ကဲဖို့ ကိုကိုကြီး သတိပေး (...
၀ဲလောင် NLD ရုံးဖွင့်ပွဲ နှင့် ဦးအောင်သောင်း
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ က...
အကြမ်းဖက် ဆူပူသူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များြ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်...
စစ်တွေ တွင် အကြမ်းဖက်သူများ ဘက်မှ လောင်ချာဖြင့် ပစ...
ငါးခူရတွင် ဒုက္ခသည် ၆၀၀ ခိုလုံ
ကုလသမဂ္ဂ ပြည်တွင်းဝန်ထမ်းတဦး ထိန်းသိမ်းထား
ယာဉ် ရပ်နားခ အတွက် အခက်ကြုံနေရတဲ့ ကားသမားတွေ ( ရုပ...
လေးဝတီ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) သတင်းစာ ရှင်းလင်...
"ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန် အတွင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင...
၁၂-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများ စုစည်းဖေါ်...
ဒီမိုကရေစီ ခံတပ်အဖြစ် ဒီချုပ် ရပ်/ကျေးရုံး ဖွင့် (...
ရခိုင်ပြည်နယ် သတင်း စာပေစီစစ်ရေး တင်ရမည် ( ရုပ်သံ-...
အခြေခံ Documentary ရိုက်ကူးရေး အခမဲ့သင်တန်း ဒုတိယ ...
အနှိုင်း အဆမဲ့ ဆုံးရှုံးနေသော အဖိုးတန် မြန်မာ့ ရေထွက...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွ င်ဒုက္ခသည်ဦးရေ တစ်သောင်းကျော် အထိ...
စစ်တွေ ၌ ဘင်္ဂါလီ များက အကွက်ချ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ထင်...
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေး ပြည်ပ မီဒီယာများကို ဆန့် ကျင်ကန...
စစ်တွေမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်အချို့ မီးလောင်မှုထပ်မံဖြစ်ပွ...
"ရခိုင် ၊ ရှမ်း နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်း...
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ၁၀၅၀ နာရီမှ ဇွန်လ ၁၁ ရက် နေ့ အထိ ရ...
မိဒွေး ရောင်းစားလိုက်သည့် ရန်ကုန်က ကျောင်းသူ မြန်မ...
တရားမ၀င် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူ လက်နက်သေတ္တာ နှစ...
မောင်တောမြို့သို့ ကူညီပံ့ပိုး ပစ္စည်းများရောက်ရှိ
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း ဒဏ်ရာရရှိသူများအား အားေ...
ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်း ဈေးလမ်းရှိ တိုက်အမှတ် (၁၅)...
ရွှေတိဂုံတွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ဒုတိယနေ့ ဆန္ဒ...
"ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာ" နိုင်ငံတေ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ်တွင် ပုဒ်မ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အဓိဂရုန်းကိစ္စ နှင့် ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံ...
ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့တွင် ယနေ့ ညနေပိုင်း မီးလော...
စစ်တွေမြို့၏ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ မြင်ကွင်းများ ( ဓာတ်ပ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ အစိုး...
ရခိုင် ဒေသအရေး အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက် ၃ ခု
ရခိုင်ဒေသအရေး ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အမြင်များ
ရခိုင်ပြည်နယ် က စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေများ (ရုပ်/သံ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက ၁၀-၀၆-၂၀၁၁ နောက်ဆုံးရ သတင်းမ...
မူဆယ်မြို့ တွင်ဗုံးငါးလုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲ
ရှမ်းပြည်နယ် မှာ ငလျှင် လှုပ်ခတ်
စစ်တွေမြို့၌ သံချောင်းခေါက်သံ များဆူညံနေ
သီတာထွေးအား မုဒိမ်းကျင့်၊ ပစ္စည်းလု သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ တရ...
တကျော့ပြန် စစ်ဘေးသင့် ကချင် ပြည်သူတွေ အတွက် ဆုတောင...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ Facebook စ...
၀၉-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်း ရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ် ...
ရခိုင် တစ်မျိုးသားလုံး၏ ဆန္ဒ သဘောထား ကြေညာချက်
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ၏ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ( ဓာတ်ပံ...
အက်ဆစ်ငွေ့ ရှူရှိုက်နေရတဲ့ ကံကုန်းရွာ ( ရုပ်သံ-သတင်...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ငွေရတု အကြို ...
မောင်တော အရေး ၈၈ မျိုးဆက် သတင်းစာ ရှင်းလင်း ( ရုပ်...
ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စအပေါ် NLD ပါတီ နှင့် တိုင်းရင်းသာ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေ နှင့်ပါတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ...
၀၉-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်း ရရှိသော ရခိုင်ပြည်န...
တာဝန်သိ ပြည်သူတဦး၏ အစိုးရ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ မျာ...
နောက်ဆုံးသိရှိရသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နို...
ရိုဟင်ဂျာ တို့ ၏ အကြမ်းဖက် ခံရသည့် ရခိုင် တိုင်း ရ...
တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်
၀၉-၀၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့မနက်ပိုင်း ရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ် ...
ယခု အချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မှ တပ်မတော်သားများ လိ...
အစ္စလမ် ဘာသာဝင် များသို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလွှာ
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို လုံခြုံအေ...
မောင်တော အခြေအနေ အာဏာပိုင်များ မထိန်းနိုင်ဖြစ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ယနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁ န...
မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်တွင် ပုဒ်မ ၁၄၄ အမိန့်ထုတ်...
အစိုးရတပ်များ မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂ...
Myanmar News Now မှ ရိုင်ပြည်နယ် သတင်းများ စုစည်း ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော အခြေအနေများ စုစ...
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ကိစ္စ နှင့် ပါတ်သက်၍ ၈၈ မျ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများ၏ အသက်ဘေး အန္တရာယ် လုံခြ...
ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ငွေရတုအကြို စာနယ်ဇင်း တွေ့ဆုံ...
ငှက်အော်စမ်း လူငယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး သင်တန...
ကျူးကျော်မြေကို သူပိုင် ကိုယ်ပိုင် တရားစွဲ ( ရုပ်သ...
"လှိုင်သာယာ ဇုန် ၂ အက်စ်စကွဲ လုပ်ခအရေး မပြေလည်သေး"
မျှော်လင့်ချက်က တစ်ဝက် သောက က တစ်ဝက်နဲ့ စိတ်ကတော့ ...
ဒီလှိုင်းဂျာနယ် အင်တာနက် လှိုင်းစီးပြီ
ဆန္ဒပြ အင်းသား၊ ရွှေလုပ်သားများကိစ္စ သတင်းထိန်းချုပ်...
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ဩစတြေးလျ နိုင်...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ လာရောက်ရန်ရှိသဖြင့် အာနန္ဒာဘုရား ရ...
အဲဗားဝင်းနား ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး ကုမ္မဏီမှာ ရေမဆေ...
တောင်ကုတ် ကိစ္စ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းစစ်...
"ထိုင်း-မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲ မဲဆောက်တွင်ပြုလုပ်"
New Stone ကုမ္ပဏီပိုင် အောင်စိန် ချည်မျှင်နှင့် ဆို...
ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ထုတ်ြ...
သံလျင် ရေနံချက် စက်ရုံဝင်းအတွင်း မီးလောင်မှု့ ဖြစ်...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ၏ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးစဉ် ရွှေ့ဆိုင်...
"တစ်သောင်းကျပ်တန်ငွေစက္ကူ ထုတ်မည်"
လောပိတ တည်ရှိရာ ကယားပြည်နယ် သုံးမြို့နယ်တွင် လျှပ်...
အောင်သူရ သင်္ဘောကျင်း ကြောင့် ဒေသခံများ အခက်ကြုံနေရ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘဲလ်ဆု ယူမည့် အခမ်းအနားသို့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်များ စာ...
“မေစုကို ကြိုဆိုရန်၊ ဘန်ကောက်သွားဖို့ ကြိုးစားသူမျ...
အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်ခံရမူ...
NLD ပါတီ ဒီဇင်ဘာတွင် နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ပါတီညီလာခ...
တပ်မတော်၊ နိုင်ငံ နှင့် နိုင်ငံရေး သမားများအတွက် သ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန...
၇၄ အလုပ်သမားအရေးအခင်း (၃၈)နှစ်မြောက် အခမ်းအနား ( ...
ကြည့်မြင်တိုင် စံပြ ငါးဈေးတွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းခရီးစဉ် သတင်းစာရှင်းလင်းပ...
ရွှေဂက်စ် ပိုက်လိုင်း လယ်ယာမြေ ပျက် ( ရုပ်သံ-သတင်း ...
တပ်မတော် ၏ နိုင်ငံရေး မှ နောက်ဆုတ်မည့် ခြေလှမ်းကို...
ဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက်သို့ ဆွီဒင် နှင့် အမေရိကန်အခြေစ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲံ့ချုပ်မှ ထုတ်ဝေသော ( ဒီ...
ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ် များအား ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်...
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှ အဖွဲ့ချုပ် အောင်နိ...
၇၄ အလုပ်သမား အရေးအခင်း ၃၈ နှစ်မြောက် နှစ်ပါတ်လည်နေ...
လှိုင်သာယာ အလုပ်သမား ဆန္ဒပြမှု အချို့ ပြေလည်မှုရ
လားရှိုး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကို ရဲက လက်ထိပ်ခတ်...
NLD အောင်နိုင်ရေး ကူညီသူ ကို နေပြည်တော် တွင် မတရား...
သီလ၀ါ စက်မှုဇုန် ဆုလတ်ရတနာ အထည်ချုပ်စက်ရုံ လုပ်ခတိ...
7Day News ဂျာနယ် အတွဲ ၁၁၊ အမှတ် ၁၂ PDF download ရယ...
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖ...
မြန်မာ - အမေရိကန် အစိုးရပိုင် မီဒီယာ နှစ်ခု ပူးပေါ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ...
စစ်တွေ ပဋိပက္ခမှု သေနတ် ဒဏ်ရာရသူ လေးဦးကို ရန်ကုန်ေ...
ထားဝယ် ခရီးစဉ် အတွေအကြုံ ဦးကိုကိုကြီး ရှင်းလင်းမည...
"လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်၍ မေတ...
တော်ဝင်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ အကြမ်းဖက်ခံရ ( ရုပ်သံ-...
Jolly Good အထည်ချုပ် စက်ရုံက စွန့်ပစ် မိလ္လာကြောင့်...
အမေ့အိမ် နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ကွန်ပြူတာ သင်တန်းဆင်...
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ နှင့် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသော ကိ...
မသီတာထွေး အသတ်ခံရမှု ခရိုင်ရုံး၌ ဇွန်လ ဒုတိယ အပတ်တွ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းခရီးစဉ် သတင်းစာ ရှင်းလင်း...
တိုင်း ဒေသကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ဗကသ များ တွေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းခရီးစဥ်သတင်းစာ ရှင်းလင်း...
"ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းပြဿနာ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေး အဖွဲ့...
ကမ္ဘောဒီးယီးယား အလုပ်သမားများရိုတ်သတ်သဖြင့် မြန်မာ...
NLD လွှတ်တော် အမတ်များအား အင်ဒိုနီးရှား တက္ကသိုလ် မှ...
မိုးထိ မိုးမိ ရွှေတောကို အပိုင်စီးထားသော အမျိုးသာြး...
စကားများ ရန်ဖြစ်စဉ် ဓားနှင့် ထိုး၍ သေဆုံး
အမျိုးသမီး တစ်ဦး အား မတရား ပြုကျင့်မှု
ကော့သောင်း ခရိုင် ကျေးရွာ ၉ ရွာတွင် အိမ်တချို့ရေနစ...
ဆူးလေ ဆန္ဒပြလူစုလူဝေး လူစုခွဲစေရန် လုံခြုံရေးရဲများ...
သတင်းစာ မှ လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အသုံးအနှုံးများ အတွက်...
ဇွန်(၆) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ နှင့် နေကြား သောကြာဂြိုဟ် ...
ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆန္ဒပြပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံနေရတဲ့ ရွာများ ( ရုပ်သံ-...
ဓာတ်ပုံ အဏ်ထော်ထီ ၄၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ ပညာဒါန...
နစ်နာသူ လယ်သမားများ ၏ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ( ရုပ်သံ...
အမေ့အိမ် ပညာဒါန အခမဲ့ ပညာရေးကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပွဲ (...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းက လှုသတ်မှု့ ရန်ကုန်မှာလည်း ဆန...
မလေးရှား လ.၀.က စခန်း(ကမ့်ခ်) အတွင်း ဒုက္ခိတဘ၀ နှင့်...
ကော့သောင်မြို့နယ်တွင် ပေါက်ကွဲသံကြီး တစ်သံ နှင့် င...
NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန် ဥရောပ ညီလာခံရောက်
စစ်တွေ၊ ရမ်းဗြဲ၊ သံတွဲ သတင်းများ
ပဋိပက္ခ ကျယ်ပြန့်စေမယ့် ရေးသားမှု
ကိုမင်းကိုနိုင် နှင့် အဖွဲ့ ယနေ့ တာချီလိတ်မြို့ကို...
The Voice Weekly မှ နေ့စဉ် တင်ဆက်နေသော သတင်းများ က...
ဥပဒေ ရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်ခရီးစဉ်မှာ လျှပ်ပြေးယာဉ် င...
တောင်ကုတ်တွင် အသတ်ခံရသူ ၁၀ ဦးကို ယနေ့ နေ့လည် သဂြိ...
ABSDF မြောက်ပိုင်း အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်မှု တရာ...
စစ်တွေ ပဋိပက္ခ တစ်ဦးသေ၊ ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရ
အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခံရမှု ရင်ဖွင့်ချက် (၁) ( ရ...
အဓမ္မ လုပ်အားပေး ခိုင်းစေခံရမှု ရင်ဖွင့်ချက် (၂) ( ရ...
ငွေတိုးချေးသူ မှ မတရား အိမ်သိမ်း ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒလပြည်သူများ အတွက် ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ အမေ့အားမာန် ပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နော်ဝေ ၄ ရက် ခရီးစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် ဖြစ်စဉ်များ နှ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ၏ မေတ္တာရပ်ခံ ကြေညာချက် ထ...
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲ ( ရုပ်သံ...
ဟိုင်မိုစက်ရုံ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားတွေကို ရိက္ခာဖြတ် ( ရ...
မြန်မာ ချစ်သူများအဖွဲ့ ပညာရေးအလှူ
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုသည် မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်...
စစ်တွေ အဓိကရုဏ်း ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သူများ ရှိ
အင်းဝမြို့ဟောင်း အနီး၌ မန္တလေးမြို့သစ် စီမံကိန်း အ...
လူသတ်မှု ဖော်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုရာ မှ စစ်တွေရဲစခန်...
မြန်မာ အစိုးရ ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များ
နိုင်ငံသားများ ၏ စားဝတ်နေရေး မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ မအုပ...
လောင်စာဆီ မပါသော ငြိမ်းချမ်းရေး ယာဉ်ကြီး ကချင်ပြည်...
ဒလမြို့ အမေ့အားမာန် ပညာဒါန ကျောင်း ဖွင့်လှစ်
မဖျက်ပေးရတော့ပေမဲ့ တရားဝင် မြေကွက် ရဖို့ ဆက်လက် ကြ...
မြေသိမ်းခံ လှိုင်သာယာ လယ်သမားများ အတွက် အိုးအိမ်ရုံ...
တောင်သူလယ်သမားများ ၏ အထူးသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်တပ်က ရာနှုန်း...
"တောင်နီ ဈေးသူ ဈေးသားများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်"
ဓာတ်တိုင် မှ ၀ိုင်ယာကြိုးများ နီရဲနေခြင်း
Hallmark အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ
လန်ဒန်ရောက် ကိုဇာဂနာ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ (က.သ.ဖ) ဖွဲ့စည်း ( ရု...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ဧည့်ဝတ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရ...
ကျောက်ဖြူ လူထု မိုးရေကြားထဲ မသီတာထွေး အတွက် သွားရေ...
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ဖိုရမ်ကို လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ေ...
ကေအိုင်အေနှင့် ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဒုတိယ အကြိမ်ေ...
လက်ပံတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း တောင်သူများ ဆန္ဒပြ
လျှပ်စစ် ဓာတ်အားတွေ ပိုလျှံလို့ ပြည်ပကို ရောင်းနေရ...
"မြန်မာဒုက္ခသည်များလိုအပ်နေသည့် အထောက် အပံ့များအလုံ...
လမ်းမတော်( ၇ )လမ်း လူသတ်မှု တရားခံဖမ်းဆီးရမ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဟောေ...
ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ (ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ) သတင်းစာရ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ဥရောပ ခရီးစဉ်...
မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း ကို သွားတဲ့ လမ်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
ရမည်းသင်း ရွှေတော အလုပ်သမားများ တပိုင်တနိုင် လုပ်ခ...
၂၀၁၃ မှစပြီး ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားတွေ ထိုင်းနိ...
အဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းသစ် ဖွင့်ပွဲနဲ့ အဆိုပြုလွှာ ပေးအ...
NGO မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ လွဲချော်မှုတွေရှိ (...
“အလုပ်များ၍ facebook သိပ်မကြည့်နိုင်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်...
“မြန်မာပြည်သည် တရုတ်၊ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံနှင့် သဟ...
၇ လမ်း လူသတ်မီးရှို့မှု ရွှေပုစွန် အိတ် မှတဆင့် ခြေရာ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၏ ထိုင်းနိုင်ငံချစ်ြ...
ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မ...
SKYNET ရုပ်သံလိုင်းမှ EURO 2012အတွက် စာနယ်ဇင်း မိတ...
NGO များ မီဒီယာ တွေ့ဆုံပွဲ
ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်း...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မဟာချိုင် ဒ...
ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာတွေ အိမ်ပြန်နိုင်ရေး ဒေါ်စု ကြိုး...
အလုပ်အကိုင်ပေါ်မယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ေ...
မေလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် BiWeekly Eleven News Journal အတွ...
မေလ(၃၁)ရက်နေ့ ထုတ်ဝေသော PopularNews အတွဲ(၄)၊ အမှတ်...